U Tin Tut – HlaMin
U Tin Tut is the eldest of seven well-known siblings.
Brother of U Kyaw Myint, U Myint Thein, Dr. Htin Aung, Daw Khin Mya Mu, Daw Khin Saw Mu and Daw Tin Saw Mu
First Burmese to become ICS by invitation.
Minister in Bogyoke Aung San’s cabinet
Was not present at the cabinet meeting on July 19, 1947
Brigadier ofaReserve Army
Office in Sparks Street (Bo Aung Kyaw Lann)
Designated as Burmese Ambassador to UK
His assassination remains “unsolved mystery” in Burma.
Perished whenabomb (placed under his car) exploded.
There were investigations, but no conclusive results were reported.
Dr. Thane Oke Kyaw Myint posted photos and articles about his Ba Gyi (e.g. The Empty Tomb near the original Arzani Mausoleum)
“Ba Gyi Aung Nyar Dei” (a famous short story by Minthuwun) has implicit references to U Tin Tut.
U Nay Oke gaveaTEDx talk at Inya Lake.
Article (in Myanmar) by Maung Lu Pay (San Lin, M87) based on the posts by Dr. Thane Oke Kyaw Myint and U Hla Min
Article by Maung Lu Pay (San Lin, M87)
basis : posts by Dr. Thane Oke Kyaw Myint and U Hla Min
အာဇာနည်နေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ မောင်လူပေတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာဦးလှမင်းက ဦးတင်ထွဋ်အတွက်မှတ်စုကြမ်း
trivia တပုဒ်ရေးပါတယ်။ သူရေးတဲ့အထဲက ဦးတင်ထွဋ်အကြောင်းလေးကို ဘာသာပြန်ပြီးတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
” ၁၉၄၇ခုနှစ် ဂျူလိုင်(၁၉)ရက်နေ့ အစည်းအဝေးကို ဦးကျော်ငြိမ်းနဲ့ ဦးတင်ထွဋ် မတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက် အသက်ဘေးက လွတ်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၄၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့မှာတော့ ဦးတင်ထွဋ်ဟာ လုပ်ကြံခံရတဲ့ဘေးက မလွတ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီနေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကံမကောင်းခြင်းတွေရဲ့ အစပထမဆိုလည်းမမှားပါ။
ဦးတင်ထွဋ်ဟာ ဦးကျော်မြင့်၊ ဦးမြင့်သိန်းနဲ့ ဒေါက်တာထင်အောင်တို့ရဲ့ အကြီးဆုံးအကိုကြီးဖြစ်တယ်။ အိုင်စီအက်စ်(ICS)ရာထူးကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ ပထမဆုံး မြန်မာလည်းဖြစ်တယ်။ သူစီးနေကြကားရဲ့ ကြမ်းအောက်နဲ့အိတ်ဇော့ပိုက်ကြားမှာ ထောင်ထားတဲ့ဗုန်းက သူ့ရုံးရှိရာ စပတ်လမ်း(ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း)ရှေ့မှာ ပေါက်ကွဲရာက ရရှိတဲ့ဒါဏ်ရာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်။
သူ့ရဲ့လုပ်ကြံခံရမှုဟာ ယနေ့အထိ လက်သည်မပေါ်ခဲ့။”
” မနေ့က ဂျူလိုင်(၁၉)က မြန်မာပြည်ရဲ့အာဇာနည်နေ့။ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်က ပြည်သူတွေ အာဇာနည်နေ့အမှတ်တရ ကျင်းပကြတယ်။
အချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ ဦးတင်ထွဋ်အသတ်ခံရမှုဟာ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ မရှိတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်မတို့မိသားစုက လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။”
ဒီနှစ်ဟာ ဦးတင်ထွဋ်ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်(၇၀)ပြည့်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့ ဦးတင်ထွဋ်အကြောင်း အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာတွေ့သမျှကို ဘာသာပြန် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။